Screen Capture and Recorder အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် XAPK（6.0MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Screen Capture and Recorder - SCAR
SCAR သည်လှပပြီးအသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည့် screen recorder နှင့် screenshot capturing app ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏စခရင်ရိုက်ကူးခြင်း၊ မျက်နှာပြင်နှင့်ပြင်ပမီဒီယာများအတွက်ကြီးမားသောဗွီဒီယိုနှင့်ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ယခု၎င်းကိုရယူပြီးသင့်အတွက်ကြည့်ပါ။
အလွယ်တကူစတင်ရန်နှင့် / သို့မဟုတ်စတစ်ကာအသိပေးချက်ကိုအသုံးပြုပါ။ အက်ပလီကေးရှင်းကိုတောင်မှဖွင့ ်၍ မရဘဲရပ်တန့်နိုင်ခြင်းများကိုရပ်တန့်ပါ။
•ထိရောက်သောသင်ခန်းစာများကိုဖန်တီးရန်အတွက်နောက်ကျော (သို့) ရှေ့ဖက်ကင်မရာကိုထိရောက်သောသင်ခန်းစာများဖန်တီးရန်မျက်နှာပြင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းတွင်အရန်အဖြစ်အသုံးပြုပါ။ စာသား (သို့) ရုပ်ပုံအမှတ်အသားကိုအလွယ်တကူထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်သင်၏ဖန်သားပြင်အသံသွင်းခြင်း။ အဆိုပါ watermarks အပြည့်အဝစိတ်ကြိုက် w.r.t. ဖြစ်ကြသည် အရွယ်အစားနှင့်ပွင့်လင်းမြင်သာမှု။
အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်သော floating ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်သင့်အား screen recording နှင့် screenshots များကိုအလွယ်တကူဖမ်းယူနိုင်သည်။ ဒါဟာအပြည့်အဝစိတ်ကြိုက် w.r.t. ဖြစ်ပါတယ် အရွယ်အစား၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့်ကလစ်နှိပ်ပါ။
ပုံရိပ် Joiner / Sticher / Merger
မြင်ကွင်းကျယ်ကိုဖန်တီးရန်ပုံများကိုအလျားလိုက် / ဒေါင်လိုက်ပေါင်းစပ်ပါ။ br> Video Compressor
စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစားနှင့်အရောင်များရှိသော paintbrush ကို သုံး၍ ဓာတ်ပုံကိုဆွဲပါ။ အမှားတစ်ခုဖြင့်သင်ဆွဲမိလျှင်ဖျက်ပစ်နိုင်သည်။
ဘာအသစ်လဲ Screen Capture and Recorder - SCAR 7.2.9
Faststone Screen Recorder | Best Screen Capture and Video Recording | Screen Record | Technical Nomi
technical Nomi Pomi